လာမည့်နှစ်တွင် ရိဒ်ရေကန်ကို အာဆီယံယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်စာရင်း ထည့်သွင်းခွင့်ရရန် ကြိုးပမ်း? - Yangon Media Group
ရိခေါဒါရ်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁
မြန်မာ -အိန္ဒိယနယ်စပ် ချင်းပြည်နယ် ရိခေါ ဒါရ်မြို့အနီး၌ သဘာဝကို အခြေခံ သော ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၏ အ ခြေခံစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အသည်းနှလုံးပုံသဏ္ဌာန်ရှိ ရေကန်ကို အာဆီယံယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းရရှိရန် ကြိုး ပမ်းလျက်ရှိကြောင်း ပြည်နယ်ယဉ် ကျေးမှုဌာနမှာသိရသည်။ ရိဒ်ရေကန်သည် အသည်းပုံအသွင်ရှိသည့်အပြင် အခြားထူး ခြားမှုများလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသော ကြောင့် အာဆီယံယဉ်ကျေးမှုအမွေ အနှစ်စာရင်းအတွင်းသို့ ထည့်သွင်း ခွင့်ရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
လာမည့်နှစ်မှာ ရိဒ်ရေကန်ကို အာဆီယံယဉ်ကျေးမှု အမွေ အနှစ်စာရင်းအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းခွင့်ရဖို့ စတင်ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်က နေသုံးမီတာသာ ကွာဝေးတဲ့နေရာမှာ တည်ရှိတာကြောင့် ခရီးသွားနယ်မြေသစ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အားသာချက်တွေကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ချင်းပြည် နယ်အစိုးရက ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းလို့ ရိဒ်ရေကန်အနီးမှာ ဟိုတယ်တည် ဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကို ဖော် ဆောင်ပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်”ဟု ချင်းပြည်နယ်ယဉ် ကျေးမှုဌာနမှ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးအွန်ကပ်က နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
ရိဒ်ရေကန်သည် မြင့်မား သော တောင်တန်းများပေါ်တွင်တည်ရှိသည့်အပြင် ရေကန်၏ထူးခြားချက်များထဲတွင် ရေခန်းခြောက်မှုမရှိ ခြင်း၊ ကြည်လင်သော ရေရှိခြင်း၊ ဒေသခံများနှင့် တစ်ဖက်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားများမှ နဂါးနေထိုင်သည့် ကန်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြခြင်း တို့ကြောင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီး နေထိုင်သူအားလုံးက အလေးအနက်ထားစောင့်ရှောက်ကြသည့် ရေကန်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယောလေးမြို့တွင် တစ်မြို့ပါဝင်သည့် ''လောင်းရှည်မြို့''၏ နှစ်(၁ဝဝဝ)ပြည့်ပွဲတော်ကို လာမည့်နှစ်??